Waa maxay Netnography? | Martech Zone
Waa maxay Netnography?
Axad, Nofeembar, 8, 2020 Isniin, Maarso 15, 2021 Douglas Karr
Dhamaantiin waad maqasheen fikirradayda qof iibsadaha ah iyo khadadka dhijitaalka ahi si dirqi ah ayey ugu qallalan yihiin bartaas, waxaanan horeyba u helay hab cusub oo aad u wanaagsan oo lagu abuuro shaqsi iibsade.
Netnography waxay u muuqatay hab aad u dhakhso badan, waxtar badan, oo sax ah abuurista qof iibsadaha ah. Mid ka mid ah tan ayaa ah shirkadaha cilmi-baarista ee khadka tooska ah u adeegsanaya xogta warbaahinta bulshada ee ku saleysan goobta (geotagged) si ay u falanqeeyaan isdhexgalka bulshada iyo doorbidka macaamiisha ee ku saleysan aag la qeexay. Nidaamyadani waxay awood u siin karaan dadka isticmaala inay ku jiidaan gacan hareerahooda meel kasta oo ay doortaan, oo ay "xoqaan" dhammaan noocyada xogta ee dadka ku sugan aaggaas.
Netnography waa laanta cilmiga dhaqanka (sharaxaadda cilmiyaysan ee caadooyinka dadyowga iyo dhaqammada shaqsiyeed) ee falanqeeya hab-dhaqanka xorta ah ee shakhsiyaadka ku jira internetka ee adeegsada farsamooyinka cilmi-baarista suuq-geynta internetka si ay u bixiyaan aragtiyo waxtar leh.
Netnography waxay uruurisaa oo ay falanqeeysaa xogta ku saabsan habdhaqanka bulsheed ee bilaashka ah ee shakhsiyaadka ku jira internetka. Furaha ayaa ah in xogtan la uruuriyay markay macaamiishu si xor ah u dhaqmayaan, kana soo horjeedaan sahaminta cilmi baarista ee macaamiisha mararka qaarkood uga jawaabaan ka hortagga ceebta ama ka farxiyaan sahanka.
Cilmi-baarista shaqsiga iibsadaha warbixinnadu waxay ka kooban yihiin xog ujeedo dhammaystiran oo tilmaam dhab ah u ah qaab nololeedka, wax soo saarka, iyo xulashada noocyada. Falanqeeyayaasha cilmi-baaristu waxay ururiyaan warbixinnada ka dibna waxay abuuraan astaan ​​u gaar ah qaybaha iibsadaha shaqsiga ee alaabtaada ama adeeggaaga.
Waa qalab aan caadi aheyn oo loogu talagalay suuqleyda maxaa yeelay xogta si dhaqso leh oo sax ah ayaa loo soo ururin karaa. Naas -nuujinta waa faa'iido maxaa yeelay shirkadaha ayaa yeelan kara astaamahooda si dhakhso leh loo ururiyo halkii ay qaadan lahaayeen toddobaadyo ama bilooyin si ay u ururiyaan cilmi-baarista. Taasi waa faraq weyn oo u dhexeeya cilmi-baarista dhaqameed ee mararka qaarkood bilooyin ku qaadan karta uruurinta iyo falanqaynta. Waqtiga aad heleyso cilmi-baarista noocaas ah, shakhsiyaadkaaga iibsadaha ah waxay u badan tahay inuu horeyba u yara wareegay. Ama xitaa wax badan.
Marka, si deg deg ah, waad ogtahay cidda macaamiishaada ugu faa'iidada badan ay yihiin, waxa ay xiiseynayaan isla waqtigaas, iyo sida iyo sababta ay ula falgalayaan asxaabtooda.
Nooca cilmi baarista shaqsiyadeed waxay gudbisaa xog muhiim ah oo ku saabsan macaamiishaada faa'iidada badan leh oo ay kujiraan dakhliga qoyska, isirka, dhibcaha xanuunka, yoolalka, saameynta, howlaha / hiwaayadaha, iyo inbadan. Warbixinadan ayaa sidoo kale kuu sheegi kara waxa websaydhyada ama magacyada shaqsi kasta ay u badan tahay inuu la shaqeeyo iyo shanta eray ee ugu sarreysa ee aad u adeegsan karto inaad ku gaarto.
Haddii aad xiiseyneyso inaad u iibsato warbixinta Netnography macaamiishaada, fadlan ila soo xiriir.
Tags: qof iibsadaha ahisirkanetnographycilmi baaris shaqsiyeedshaqsiyeedRobert Kozinets
Ku kobci Awoodaha Goobta Gudaha ee 'WordPress' iyadoo la adeegsanayo Raadinta Sare ee Jetpack